AKHRISO-War Ku Aadan Doorashada Puntland oo Hadda Garoowe Lagaga Dhawaaqay.
Anigoo ah musharax madaxweyne Puntland doorashada 2019 Cabdixakiin Maxamed Siciid waxaan halkaan ku soo gudbinayaan dareenkayga ku aadan khilaafka ka dhashay magacaabista gudiga xallinta khilaafaadka iyo ansixinta barlamaanka cusub ee Puntland ay yeelan doonto 2019 ilaa 2023.
Maadaama Puntland ay ku guuldaraysatay hirgelinta doorasho madaxtinimo oo qof iyo cod ah, isla markaana weli lagu dhaqmayo hanaankii waxqaybsiga beelaha ee soo xulista xildhibaanada oo aan ahayn mid dastuuri waxaa lagama maarmaan ah in la dhowro deganaanshaha siyaasadeed iyo quluubta shacabka Puntland.
Haddii barlamaankii waqtigiisu dhammaaday iyo xukuumadda hadda talada haysa ay ku guuldaraysteen dejinta shuruuc rasmi ah oo caddaynaysa cidda awoodda u leh magacaabista gudiga xallinta khilaafaadka iyo ansixinta barlamaanka waxay ahayd in sidii hore madaxweynuhu magacaabo talagelyana ka siiyo dhinacyada kale ee ay qusayso ayna noqdaan kuwa u adeegaya danaha guud ee reer Puntland kana durugsan eex ama xiriir gaar ah laleh musharixiinta iyo madaxweynaha.
Aragtidayda ku aadan gudiyada iska soo horjeeda ee la magacaabay.
Kadib magacaabistii gudiga madaxweynaha waxay ku haboonayd in musharixiintu miiska la fariistaan madaxweynaha kalana hadlaan wixii cabasho ah ee ay ka qabaan xubnaha uu magacaabay si laysaga turxaan bixiyo ama looga saaro ciddii ay isku raacaan, haseyeeshee kooxa kooxaysi iyo madalo iska soo horjeeda waxay hanjebinayaan shacabka Puntland waxayna muujinaysaa inaan dowladnimadii ka dhigayno midaan waxba kajirin.
Sidaasi darteed waxaan soo jeedinayaa?
1-In Dhamaman madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka iyo anaga musharixiinteenuba aan miiska isugu nimaano kana wada hadalno danta shacabka iyo sidii doorasho muran la’aan ah u dhici lahayd waqtigeeda.
2-In musharixiinta u yeeraan gudiga madaxweynuhu magacaabay kalana hadlaan labo arrimood.
A-Inay wax kala ogaadaan shaqada loo igmaday ama Mandate-kooda shaqo
B-Inaysan noqon xubno ay ku cadahay u adeegidda dano cid gaar ah.
3-Waxaan soo jeedinaynaa aniyo kooxdaydu in khilaafku uusan harayn isbedelka cusub ee ay Puntland u baahan tahay. Muhiimadu maaha yaa guuleysanaya balse waxay tahay sidee u heli karna hogaamiyihii Puntland ta cusub iyo helitaanka.
Puntland aan qabyaalad curyaamin
Puntland sharcigu sareeyo
Puntland cadaalad ay helaan uunka ku dhexnool
Puntland jahl, cudur iyo gaajo ka xorowdey
Puntland deriskeeda nabad kula nool
Dhaqaale hufan oo qof waliba si siman wax qaybsado Waxaan dhammaan umadda reer Puntland u rajaynayaa midnimo, horumar iyo inay ka shaqeeyaan sidii uusan waqti dambe uga dhumi lahayn ee ay ula xisaabtami lahaayeen hogaanka ay doortaan.
Cabdixakiin Maxamed Siciid